Isiprofetho sikaDavid Wilkerson kuCorona Pandemic 1986
Ngibona inhlupheko iza emhlabeni. nemigoqo, amasonto nohulumeni kuvaliwe.
Lesi sifo sizohlasela iNew York City, bese sinyakazisa idolobha ukuthi alikaze linyakaziswe ngaphambili.
Isiprofetho sikaDavid Wilkerson 1986
Ngibona inhlupheko iza emhlabeni. nemigoqo, amasonto nohulumeni kuvaliwe. Lesi sifo sizohlasela iNew York City, bese sinyakazisa idolobha ukuthi alikaze linyakaziswe ngaphambili.
Ukuhlushwa kuzoshintsha amakholwa "angathandazi" abe yimikhuleko ethandekayo kanye nabafundi beBhayibheli abakhuthele, futhi "ukuphenduka" kuzoba ukukhala kukankulunkulu okhalayo epulpiti.
Kulesi siphuma "ukuvuka kwesithathu" okuzodlula kulo lonke elaseMelika nasemhlabeni jikelele.
Mayelana noDavid Wilkerson UDavid Wilkerson, owazalwa ngoMeyi 19, 1931 eHammond, eIndiana, washona ngo-Ephreli 27, 2011 eduzane naseCuney eCherokee County, eTexas, wayengumvangeli waseMelika.
Eqhutshwa usizi olunamandla nesifiso esilula esingaphakathi endlini, asithola ngesikhathi somkhuleko eyedwa ekhaya lakhe, weza ngonyaka we-1958 njengomfundisi osemusha eNew York ezosebenza nentsha eyisigebengu, engasengozini.
Lokhu kuholele ekusungulweni kwenhlangano yomhlaba wonke yezithunywa zevangeli kanye nokuvuselelwa kwezidakamizwa iTenen.
Ngaphezu kwalokho okumelwe Esiphambanweni naseStilettos, waziwa kakhulu ngemiyalezo yakhe eqinile yesiprofetho futhi njengomholi we-Times Square Church eManhattan.
UWilkerson ushone engozini yemoto.
Le ndatshana yaqhamuka ngemuva kwethiphu.
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 03:54